Isithakazelo inkanuko ngokubona isitayela Keyt Bekket, lingasho kuphela ukuthi into eyodwa: Heroine yochungechunge "Castle" has a yimpumelelo enkulu nge izibukeli.
actress Ebukekayo Stana Katic, odlala indima, kwaqala ukuvela movie ngengozi. Kakade bekwi-University of Toronto eminyangweni of biology, kwamaZwe kanye fashion design, yena ngengozi ahlangana nabo emgwaqweni nomngane wakhe wakudala, ngubani bammemela inkanyezi naye ifilimu emfushane.
Abazali Stana Zhaklin Katich zivela ezweni elaliyiYugoslavia, bathuthela uhlala e-Canada, lapho e Hamilton Apreli 26, 1978, inkanyezi esizayo wazalwa.
Emndenini omkhulu ngaphezu Mills kwakuseyimpi amadodana 4 nendodakazi. ngemva kweminyaka embalwa nje kokuzalwa kwayo umkhaya wathuthela e-United States emzini Aurora (IL), lapho le ntombazane waya esikoleni futhi ngathola iziqu ngayo udumisa. Ukuba abahlakaniphe kakhulu, Stan wangena top ten okungcono esikoleni esiphakeme abathweswe iziqu.
Oluphethe izilimi eziningana, ngemva kokuphothula esikoleni esiphakeme wametha efundisa e-Faculty Wezangaphandle e-University of Tironskom. Nge izithakazelo ububanzi, wayengenakukwazi ukunquma ngokushesha ukuthi afuna ukukwenza ekuphileni, ngakho kwafika nomunye 2 neminyango - fashion design, nezesayensi yezinto eziphilayo.
Ukuze ukhethe umsebenzi wasiza ukudubula ifilimu encane. Inqubo esebenza ngakho walithanda ekamu, yena wangeniswa lokuyofunda studio esebenza eKolishi Colombia, e eGoodman School of Drama eChicago Royal Dance School eCanada.
Ikamu kuyisimo actress abanamakhono hhayi kuphela, kodwa futhi intombazane egxilile kakhulu futhi enamandla. ukuqeqeshwa amakilasi wakhe efana karate okuzobe kudlalelwa izimpi waseshashalazini, wasiza ekudalweni izithombe ezifana Keyt Bekket ( "Castle"), Marianne ( "Pit inkunzi"), uDiana Palos ( "Ubuso") kanye nabanye abaningi.
Iqhaza lokuqala elijabulela hhayi movie, futhi yaseshashalazini, okwamsiza ukuba sikhule njengomdlali waseshashalazini e kudlala ezifana "Romeo and Juliet" futhi "Richard III" kaShakespeare "We-seagull" by laseChekhov, "Ukwelashwa ngale", "A Christmas Carol" nabanye abaningi.
Tindzima lokuqala movie ayemancane, kodwa esiyinhloko sehlelo TV ewuchungechunge ezifana "Isihlangu," "ER," "Heroes", "amahora angama-24". umsebenzi Big esiteji liye kwelulwa 8 zonyaka, isibe omunye izindima eziyinhloko - Keyt Bekket - ochungechungeni TV "Castle."
Phakathi imisebenzi yakhe nazo izindima kwezobuciko futhi kumabonakude e-ifilimu "I Wezincwadi 3", "umkhosi Uthando", "The Avengers" Frenka Millera, "Quantum ka Solace" futhi "INdlela ikhaba."
Uchungechunge oluthi "Castle"
Ukubona actress Keyt Bekket benza uyaphila ngakho futhi ezicacile, ukuthi ingxenye lensikazi abalandeli yochungechunge ngabomvu ochungechungeni omusha, ukuze ubone ukuthi kuyoba Heroine egqoke, nakuyo inxenye wesilisa - ukucabangela isinyathelo brand izikhali ezandleni iphoyisa zesifazane.
Uzungu lokhu ahlekisayo umphenyi uchungechunge igxile umlingiswa oyinhloko - umbhali Richarda Kasla, lolungenamaphutsa eyadlalwa Nathan uFillion. Kwethulwa umlobi yimpumelelo ne umphenyi sasingagwemeki, njengoba uchungechunge zokubulala ezenzeka edolobheni, wathwalwa ngokusebenzisa indaba amanoveli akhe.
Keyt Bekket, okuyiwona waba umsolwa wokuqala, ungakwazi ukuthola imbangela yangempela ngosizo umbhali. Cooperation Kate noRichard lokhu alikapheli, njengoba umbhali uyasiqonda Psychology zamacala, ebasiza ukuba ngokushesha ukubamba Heroine, futhi - ukuqoqa izinto ngoba amanoveli elandelayo. Esikhathini esizayo, indlela izinhlamvu abaphila ngakho eduze ukuthi 7 isizini, bengena umshado evumelekile.
Kuwo wonke zonyaka Keyt Bekket, (lokubulala unina engadalulwanga) kabani biography iqukethe futhi izimfihlo, futhi ukutadisha isiRashiya e Kiev, futhi kabuhlungu ngokusebenzisa kwababusi lomncane umphenyi zesifazane esigabeni 12 amaphoyisa eNew York, kuba eduze nokuqonda izilaleli, ngoba empathizes ngobuqotho nge nabongazimbi bobulelesi.
Ubunjalo umlingiswa oyinhloko webhayisikobho eziningi Izigayo eziningi - inkani nokuphikelela kwamenza, ekufezeni somphumela ohlosiwe umsebenzi onzima, ukukhalipha zemvelo nobuhle.
Isitayela yokugqoka kusukela Keyt Bekket
Google umphenyi, kodwa ngesikhathi esifanayo isifazane, sexy futhi ekhangayo, kunzima ngokwanele, njengoba umsebenzi kudinga izinto ezithile ukugqoka isitayela esiqinile.
Keyt Bekket isitayela ingubo singasetshenziswa hhayi kuphela amabhayisikobho, kodwa ekuphileni kwangempela le, yingakho izibukeli bathandile Heroine yochungechunge kanye sasilangazelela uchungechunge entsha.
On the uhlamvu ngokuvamile liyavela pantsuits kodwa nenhle elula ihembe noma jeans, turtleneck kanye lesikhumba jacket. Kuye isikhathi sonyaka, Kate ogqoka ibhantshi double breast e imibala emnyama noma shades of beige ababegqoke amajazi.
"Ukusebenza" izicathulo Heroine chungechunge, Isimanga siwukuthi, - izicathulo ngesikhathi isithende kahle eliphezulu, kodwa engaguquki. Ekhaya nangaphandle komsebenzi ukhetha okuxekethile, izingubo ukhululekile futhi izicathulo - jeans, izikibha futhi amateki.
Ngenxa yalesi isitayela Kate efana izibukeli yayo, okwenza kube ngisho nangokwengeziwe emehlweni esidlule.
Stana Katic has a ubuhle ekhumbulekayo ukuthi akadingi ethehlsasi ezengeziwe, ngakho makeup Keyt Bekket, ubunjalo baso, yemvelo futhi cishe imperceptible. Lokhu okuthiwa ehhovisi isitayela, lapho umthunzi iyashintsha iyaphupha ibe shades yemvelo, i-inki omnyama ipensela imicibisholo abamnyama.
Lipstick noma isicwebezelisi cishe ezingabonakali phezu izindebe, futhi izinwele Keyt Bekket - izinguquko isitayela kusukela isizini eyodwa kuya ochungechungeni esilandelayo. Uma ngenkathi 1 ayenakho nezinwele ezimfishane, bese ulandela izinwele kuba eside futhi isikhathi eside. Kulokhu Heroine yena sibonga kabi, lo curled, izinwele ngendlela Bun futhi uguqulwe isikhathi ngasinye look entsha lumsiza ukuba hhayi laba yisicefe tetsamelilwati takhe wona.
Ngesikhathi Heroine yochungechunge "Castle" ungukuphila kubenzima, njengoba kuye kwaba akuyona womama - ekufuneni izigilamkhuba. Empilweni yakhe siqu futhi ubelokhu ubugebengu njengoba unina wabulawa, futhi owonile ayikwazi ukutholwa futhi yicala.
uyise Kate sika ngemuva kwesigameko waqala ukuphuza kakhulu, futhi kuyosindisa ukuphila kwakhe kulo mkhuba futhi yawela emahlombe ababuthaka sentombazane.
Sebenza njengoba iqembu ne umlobi uRichard Castle, ukuphoqelela isikhulu samaphoyisa e indima consultant, ekuqaleni ecasula Kate, kodwa kancane kancane imizwa yakhe kulolu guys nice and cute sishintshe kakhulu kangangokuba sebeshadile. ababukeli abaningi balindele ochungechungeni kuyothiwa ukuthi Keyt Bekket abakhulelwe.
Uchungechunge yokugcina ochungechungeni 8 isizini ngaphandle ngo-Okthoba-November 2015. Njengenjwayelo, ekupheleni umbukiso omuhle ngempela abanye ekubangela ukudabuka abalandeli bakhe.
Lo mlingisi nobunjalo wakhe
Uchungechunge oluthi "Castle" kwakufanele Stana Katic umsebenzi sina eside, okwakuthatha ngaso sonke isikhathi futhi zidinga ukuzimisela esigcwele. Nokho, actress, letivamile letifana nemlingisi wakhe, wathola uthando futhi eseshadile. Igama lakhe kukhethwe Chris Brklyak kanye lomshado ngokwalo Kwangimangaza lokho ngisho paparazzi.
Sekuyisikhathi eside kakhulu, actress uvele on amaqembu wokuziphilisa ahlukahlukene wedwa, ngangingeke ezihilelekile amahlazo futhi kanzima futhi ufeze okuthile, ngakho umshado wakhe, owawusedolobheni ezweni mlando abazali bakhe - eCroatia, waba isasasa.
Okokuqala wabonisa "insipho opera" eSoviet Union - izikhali zembubhiso